Shayela Abaphenyi Base-Afrika Olwandle - i-AfricArXiv
Kushicilelwe ngu USam Dupont on I-6th Ngo-Ephreli 2021 I-6th Ngo-Ephreli 2021
Ukwakha ikhono lezikhungo zase-Afrika ekuqapheni nasekucwaningeni i-acidification yasolwandle, ngalokhu sihlanganyela nekhwelo lokuthi iqhaza libambe iqhaza Inethiwekhi ye-OA-Africa ibhekiswe kubaphenyi basolwandle base-Afrika.
Ocean Acidation Africa (OA-Africa) yinethiwekhi ye-pan-Afrika ebizwe ngokukhethekile ukuxhumanisa nokwazisa olwandle acidization (OA) ukuqwashisa nocwaningo e-Afrika. Imisebenzi yocwaningo mayelana ne-acidification yolwandle kanye nezingcindezi ezihlobene nezwekazi lase-Afrika zikhula ngokushesha ngokuphendula isidingo esicacile sokwenza okuthile ukunciphisa nokubhekana nemithelela ebangelwe ukushintsha kwesimo sezulu kanye nohlelo olubanzi. I-OA-Africa yakhiwe ngososayensi abanentshisekelo yokwenza ucwaningo ngokuqapha nokubheka i-acidification e-Afrika futhi bayingxenye ebanzi Inethiwekhi Yomhlaba Wonke Yokuqapheliswa Kwezilwandle
I-OA-Africa ihlose ukwenza lokhu:
1. Siqinisekise I-Afrika iyakwazi ukuqina futhi inolwazi ngezinsongo ezingaba khona kanye namasu okunciphisa / wokuzivumelanisa nezimo atholakalayo ukulwa ne-acidification yolwandle.
2. Develop inethiwekhi yososayensi abasebenza ndawonye ukuhlinzeka (1) ngolwazi kubabambiqhaza nakubenzi bomgomo, (2) ukuhlinzeka ngokuholwa kanye nokuqondiswa (3) ukuxhumanisa imisebenzi ephathelene nocwaningo nokuqapha kwe-OA (4) ukukhomba ukwesekwa okubanzi kokwanda kocwaningo lwe-OA nokuqapha ukugqugquzela ukuthuthuka kwesayensi.
3. Lungiselela ukusebenzisana phakathi kososayensi, ababambiqhaza, nabenzi benqubomgomo ukwakha ukuqonda ngemithelela yezenhlalo, yebhayoloji, neyomzimba kanye nemiphumela ye-acidification yolwandle
Kule minyaka engu-7 edlule, sithuthukise uhlelo oluhlosiwe lokukhulisa amandla okwenza ukuqapha nokucwaninga nge-acidization olwandle emazweni asathuthuka. Sigijime ukuqeqeshwa okungaba ngu-20, safinyelela ososayensi abangaphezu kuka-400 futhi sanikeza izinsiza kusebenza ezikhungweni eziningi.
Ukuhlolwa kwamandla e-Ocean Acidification
Ochwepheshe be-acidification e-Ocean sebenze uhlu lwemibuzo lokuhlonza izidingo kanye nokwakha imizamo yokwakha amandla esizayo (okokusebenza, ukuqeqesha). Lolu lwazi luzozuzisa umphakathi ocwaningayo wase-Afrika futhi luqondise izenzo ezizayo. Kuzokwakhiwa i-database engaziwa futhi yabelwe nomphakathi. Isifinyezo sizohlanganiswa ephepheni elimhlophe le-OA-Africa elibhekise kubenzi bezinqubomgomo ukuheha izinsiza zocwaningo lwe-acidification e-Afrika.
Ukubamba iqhaza, kufanele ube yisisebenzi esikhungweni sase-Afrika esisebenza kwisayensi yasolwandle. Awudingi ukuthi njengamanje usebenze kuphrojekthi ye-acidification yolwandle. Lokhu kuhlola ukuhlinzeka ukwesekwa okubhekiswe ezikhungweni nokwenza ngcono amathuba azo okuqala ukuqapha nokucwaninga nge-acidification yolwandle kungekudala.
Sicela ugcwalise uhlu lwemibuzo olulandelayo; kufanele kuthathe kuphela imizuzu eyi-15-20:
Iya kuhlu lwemibuzo
Ukusivumela ukuthi sihlole umthamo wokucwaninga nge-acidification yolwandle ezwenikazi lonke, sicela wabelane ngemibuzo nozakwenu.
Uma ngabe usuvele uphendule uhlobo oludlule lwemibuzo, sicela uphendule futhi ukuze ubike inqubekela phambili ngokuhamba kwesikhathi.
UDkt Sam Dupont
Indawo yokugxila ekwakhiweni kwamakhono we Isikhungo Se-Ocean Acidification International Coordination Center (OA-ICC)
USolwazi Omkhulu kanye noProfesa Ohlangene, eNyuvesi yaseGothenburg, eSweden
Tags: ukushintsha kwesimo sezuluUcwaningo LwasolwandleUkuqina kolwandleCindezela